WEA Series Slewing Drive Factory - China WEA Series Slewing Drive ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ
Heavy type Enclosed housing Dual Worm ဂီယာ Slewing drive WEA25-2
1. Heavy type Enclosed housing Worm gear Slewing drive
3. လေးလံသောစက်အတွက် Slewing Drive
စတော့ရှယ်ယာ အကြီးစား WEA စီးရီး Slewing drive WEA9 အမျိုးအစားကို ရောင်းချရန် ရေပန်းစားသည်။
1. ရောင်းအားကောင်းပြီး စတော့ရှယ်ယာများ လှည့်ပတ်မောင်းနှင်ခြင်း။
2. slewing drive အတွက်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်း
3. အလုံပိတ်အိမ်ရာ slewing drive
4. OEM ရရှိနိုင်ပါသည်။
5. တိကျမှုအဆင့် IP 65
Mist Cannon Truck အတွက် WEA14 Heavy Type Slewing DriveWanda
အရည်အသွေးမြင့်စက်ရုပ်လက်မောင်း Slew Drive ကိုအသုံးပြုပါ။
Slew drive သည် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး အပလီကေးရှင်းများတွင် ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကင်းသော စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပေးစွမ်းသည်။စက်ရုပ်လက်မောင်းတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။ကုန်ထုတ်စက်ရုံများနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး စက်ယန္တရားများသည် ပါဝါလှုပ်ရှားမှုနှင့် လည်ပတ်အားကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် slewing drives များကို အသုံးပြုသည်။စက်ပစ္စည်းများနှင့် စက်ရုပ်များသည် နေရာချထားမှု တိကျမှုနှင့် တသမတ်တည်း စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် slewing drives များကို အားကိုးသည်။